लन मोवर ब्लेडका उपकरण सामग्रीहरू के हुन्
लन मोवर ब्लेडमा के सामग्री छ? झेंचिडा ब्लेड कारखानाले हाम्रो लागि व्यावसायिक विश्लेषण गर्नेछ। उपकरण सामग्री मौलिक कारक हो कि उपकरणको काट्ने प्रदर्शन निर्धारण गर्दछ, जसले प्रसंस्करण दक्षता, प्रसंस्करण गुणस्तर, प्रसंस्करण लागतमा ठूलो प्रभाव पार्दछ ...
केहि लॉन घास काट्ने ब्लेड प्रयोग गर्दछ तपाईंलाई थाहा छैन
हामीलाई थाहा छ कि त्यहाँ धेरै लान मोवर ब्लेडहरू छन्, त्यसैले यो हामीलाई छनौट गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। लन मोवर ब्लेडहरू कसरी छनौट गर्ने? मावरको ब्लेड कसरी समायोजित गर्ने? र कसरी लन मोवर ब्लेडहरू प्रयोग र मर्मत गर्ने? निम्न सम्पादकले तपाईंलाई परिचय दिनेछ। कसरी एक ला को ब्लेड समायोजित ...
एक मावर मलिंग ब्लेड कसरी स्थापना गर्ने
२०-१०-१-13 मा प्रशासक द्वारा
लन मोवर ब्लेडका प्रकारहरू: लन घाँस काट्नेहरूले सामान्यतया दुई प्रकारको ब्लेड प्रयोग गर्दछ। सामान्यतया, एक घाँस काट्ने उपकरणले काट्ने ब्लेड प्रयोग गर्दछ। यस ब्लेडले घाँस काट्छ र घाँस काट्ने बित्तिकै घाँस काट्ने बलिको घाँस काट्छ। यसको प्रयोग मल्टि। ब्लेड पनि हो। यो घाँसलाई धेरै चोटि काट्न र घाँस फेर्न डिजाइन गरिएको हो ...